आज नङ डिजाइन वृद्धि ध्यान प्राप्त गरेको छ। आखिर, यो उनको व्यक्ति ध्यान आकर्षित गर्न महिलाहरु द्वारा प्रयोग गरिन्छ जो अर्को बाटो छ। राम्रो-groomed र सुन्दर हात सफल र आधुनिक महिला को छवि एक बेबदल भाग हो। नङ रूपमा पनि मेकअप मूल डिजाइन को उचित सेक्स पहिरन कुरा हुनेछ न्यूनतम संग, सामान्य उपस्थिति एउटा पूरक हुन्।
नियमित भ्रमणमा सैलून, छैन सबै महिलाहरु उपलब्ध एक सुअवसर नङ, यो कारण लागि, नङ उद्योग विकास स्थिर चरण मा छ र सामान्य घरेलू प्रयोगमा सही मैनीक्योर सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने उपकरण र संसाधन को एक किसिम प्रदान गर्दछ। स्वतन्त्र नङ को डिजाइनमा संलग्न गर्न चाहनुहुन्छ गर्नेहरूका लागि सुन्दर विकल्प मुद्रांकन को खरीद हुनेछ।
पलिश मुद्रांकन - सिर्जना को बजेट फारम मैनीक्योर को कला, जसको लागि व्यावसायिक सीप आवश्यक छैन। प्राप्त परिणाम को एक परिणाम कमसल व्यावसायिक पेन्टिङ छैन रूपमा यो उपकरण प्रयोग गरेर विभिन्न रंग को नङ ओछ्यानमा रेखाचित्रहरूमा, लागू गर्न सकिन्छ। यस्तो चित्र भनिन्छ - नङ कला मुद्रांकन।
सामान्यतया, मुद्रांकन लागि सेट एक मानक मा जस्तै आइटम समावेश गर्दछ:
टिकट वा छाप।
एक्रिलिक वा अन्य उपयुक्त रंग वा नङ पालिस।
प्रत्येक तत्व एक विशेष समारोह, जस्तै, टिकटले नङ गर्न धातु डिस्क देखि छवि स्थानान्तरणका लागि आवश्यक छ छ। यो airtight सामाग्री वा रबर बनेको र प्लास्टिक टिप अतिरिक्त संलग्न सुविधाको लागि छ।
को मुद्रांकन पलिश समावेश डिस्क-प्याड, मुख्य रूप धातु बनेको र इम्बोस गरिएको संग आकारको छन् गहने ढाँचा। एक डिस्क मा cliché सामान्यतया 7-9 तस्बिरहरू राखिएको छ।
को खुरचनी या त या प्लास्टिक धातु हुन सक्छ, यो डिस्क-को cliché देखि अतिरिक्त लाह हटाउन आवश्यक छ।
नङ मुद्रांकन presupposes रंग को अस्तित्व, तिनीहरूले structurally केहि मोटा र भन्दा denser छन् नङ पालिस, पनि रंग को एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत।
को patterning प्रक्रिया मुद्रांकन कसरी प्रयोग गर्छ? को नङ को सुरुमा तयार हुनुपर्छ। यो नि: शुल्क छेउको फारम लिन, वार्निश को पुरानो पत्र हटाउन र त्यसपछि आफ्नो लम्बाइ समायोजन, सुग्घर अप cuticle र periungual ऊतक आवश्यक छ। त्यसपछि, नङ प्लेट तरल नङ पालिस रिमुभर यसलाई wiping द्वारा degreased हुनुपर्छ - यो दृढ रेखाचित्र सुरक्षित हुनेछ। अर्को चरण - एक आधार कोट लागू।
त्यसपछि हामी ढाँचा सिर्जना गर्न अगाडि बढ्न सक्छ। धातु प्याड मा Disk-, रंग वा वार्निश मुद्रांकन लागू खुरचनी उत्कीर्णन डिस्क संग अतिरिक्त छ हटाइयो। यो इम्बोस गरिएको आंकडा cliché मा बाँकी पुनर्मुद्रण र नङ प्लेट मा परिणामस्वरूप तस्वीर स्थानान्तरण गर्न छापाखाना मात्र रहनेछ। मूल डिजाइन तयार छ! , सबै औंलाहरु वा एक ह्यान्डल गर्ने चयन शैली आधारमा को त्यस्तै सक्षम। स्वयं सधैं सजिलो छ मुद्रांकन पलिश कि प्रदर्शन एक राम्रो सानो भागहरु राख्न मद्दत गर्छ भन्ने टिप्पण लायक छ।
मुद्रांकन - यो कलात्मक क्षमता गरिब, एकदम केहि कसरत र सुग्घर र सुन्दर मैनीक्योर तपाईं को लागि प्रदान छ कि घटना बाहिर एउटा सजिलो तरिका हो!
छोटो नङ लागि मैनीक्योर: यो हुन सक्छ रूपमा
गेमिङ ल्यापटप GS70 MSI: समीक्षा, समीक्षा, विनिर्देशों
पेन्सन "Aitarou" (सुखुमी) सेवा र मनोरञ्जनको गुणस्तर समीक्षाएँ
दबाइ "Demodex रोक्नुहोस्।" "Demodex रोक्नुहोस्": मूल्यहरु, समीक्षा
भान्सा मा टिभि कसरी चयन गर्न
Staphylococcus Aureus: संक्रमण उपचार मा कठिनाई
Bogdan को नाम को मूल र भाग्य मा आफ्नो प्रभाव
कसरी डोनटहरू लागि भराई एक मिसिन चयन गर्न। डोनट को उत्पादन को लागि उपकरण को समीक्षा
संगीत के सुन्न?